युवतीको यो तस्बिर किन भयो रातारात भाइरल ? – List Khabar
Home / मनोरंजन / युवतीको यो तस्बिर किन भयो रातारात भाइरल ?
admin January 22, 2022 मनोरंजन Leaveacomment 61 Views
मुम्बई । शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान चर्चामा आइरहने ‘स्टारपुत्री’ का रुपमा चिनिन्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय सुहाना आफ्ना तस्विर र भिडियो मार्फत फ्यानसंग जोडिएकी छिन् । हालै उनले इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा शेयर गरेको एउटा तस्विर भाइरल भयो । उनले मिरर सेल्फी इन्स्टाग्राम स्टोरीमा शेयर गरेकी थिइन् ।
सुहानाको उक्त तस्विरले धेरैलाई लोभ्यायो । उनको इन्स्टाग्राममा काफी फ्यान छन् । आफ्नो पढाइ सकिएपछि बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेकी सुहाना अभिनय सिक्ने तयारीमा छिन् । उनका पिता शाहरुख खानले केही अघि भनेका थिए ‘कम्तिमा तीन वर्ष अभिनय सिकेर मात्रै सुहाना अभिनयमा प्रवेश गर्छिन् ।’
अन्य समाचार | काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभाव परेसँगै देशका उच्च पहाडी तथ हिमाली भेगमा हिमपात पर्न थालेको छ । यसैक्रममा बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेदेखि चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ पर्न थालेको चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.ले जनाएको छ ।
Previous गण्डकी प्रदेशमा २६८ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित
Next के तपाईको छाती दुख्छ ? कतै तपाईलाई यस्तो रोग त लागेको छैन ?